Gene Hackman အခုဘာလုပ်နေလဲ။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > ယခု Gene hackman - ဘုံအဖြေကို
ယခု Gene hackman - ဘုံအဖြေကို
Gene Hackman အခုဘာလုပ်နေလဲ။
ယခု HACKMAN Gene
မင်းမမြင်ဖူးဘူးGene Hackmanသူသည်ပျော်ရွှင်စွာနှင့်တရားဝင်အနားယူခဲ့သည့်ရိုးရိုးလေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ။ သူသည်ကျန်ရှိသည့်ကျန်ရှိနေသေးသောအချိန်များကိုနယူးမက္ကစီကိုပြည်နယ်၊ စန်တာဖဲတွင်ပိုင်ဆိုင်သောအိမ်တွင်နေထိုင်နေပြီးသူ၏အီလက်ထရောနစ်စက်ဘီးဖြင့်မြို့တစ်မြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေဆဲဖြစ်သည်။ဇူလိုင် ၉ 2020 ဂရမ်။
ဆယ်စုနှစ်ငါးခုနီးပါးမျှ Gene Hackman သည်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်း San Bernardino မှမွေးဖွားခဲ့သောသရုပ်ဆောင်သည် Hoosiers, Unforgiven နှင့် Get Shorty ကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်သရုပ်ဆောင်စဉ် Golden Globes (၄) ခု၊ BAFTA (၂) ခုနှင့်အကယ်ဒမီဆုပေးဆုနှစ်ခုတို့ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အနည်းငယ်နာမကိုအမှီ။
သို့သော် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းကတည်းကအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့သောသရုပ်ဆောင်နှင့်အမေရိကန်သူရဲကောင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရသေးပါ။ ဒီတော့ Hackman ကဘာလဲ? ပထမ ဦး ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Hackman ဟာအငြိမ်းစားယူထားတာပါ။ အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာဒီကောင်လေးကိုသိပ်မကြာသေးခင်ကမှမတွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။ သူ၏နောက်ဆုံးအခန်းကဏ္2004မှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှကြိုဆိုသည့် Mooseport ၏ရင်ခုန်စရာဟာသတွင် Ray Romano ၏ဆန့်ကျင်ဘက် sitcom ကြယ်ပွင့်တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အဲဒီနောက်မှာ Hackman ကအရှုံးပေးခဲ့ပေမယ့်သူဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုမရခဲ့ပါဘူး။ သူကရိုက်တာကိုပြောတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကမှတကယ်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အခန်းကဏ္ up တွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုမပြောဖို့ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်မလိုချင်ဘူး။ ဒါကိုမလုပ်နဲ့ လုံးဝနှင့်ဆွေးနွေးမှုမပါဘဲ '' 'Romanist Hackman ဟာဒီကိစ္စကနေအနားယူလိုက်တာနဲ့သူအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။
တကယ်တော့သူကအတော်လေးဝတ္ထုရေးသားခဲ့သည်။ သမိုင်း ၀ တ္ထုသုံးခုကိုပူးတွဲရေးသားခြင်းအပြင် Hackman သည်တစ်ကိုယ်တော်ကြိုးပမ်းမှုနှစ်ခုကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့သည် - Old West လက်စားချေမှု Morning Peak တွင် Payback နှင့်ရဲသည်းထိတ်ရင်ဖို Pursuit ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Hackman ဟာရေးတာထက်စာရင်ရေးတာပိုကြိုက်တယ်။
သူကရိုက်တာကိုပြောတယ်၊ ၎င်းသည်အချို့သောနည်းလမ်းများဖြင့်သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်၎င်းသည် ပို၍ သီးသန့်ဖြစ်ပြီးငါ၌ရှိသောအရာကိုကျွန်ုပ် ပို၍ ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ 'ငါပြောပြောလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
ပန်းချီဆရာ ၀ တ္ထုရေးခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအပြင် Hackman ၏အနုပညာဆိုင်ရာပန်းချီကားများတွင်ပန်းချီကားများပါ ၀ င်သည်။ အောင်မြင်သောသရုပ်ဆောင်သည်နယူးယောက်ရှိအနုပညာကျောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်တွင်လူငယ်တစ် ဦး အဖြစ်အနုပညာကိုအမှန်တကယ်လေ့လာခဲ့သည်။ ငါဟာမင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့စောင့်နေရင်းနဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါပန်းချီဆွဲသည်ပန်းချီကားများကိုတစ်ချိန်လုံးနီးပါးလုပ်သည်။ '' အဲဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာအနုပညာကိုတီထွင်ခဲ့ပေမယ့်သူမခေါ်တာကိုပြသဖို့ခဲယဉ်းတယ်။
သူသည် ver ကဲ့သို့ပင်အချို့သောအနုပညာလက်ရာများကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ No Grandpa Roles (ဟယ်မန်းအခန်းကဏ္olesမရှိပါ) Hackman ရဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးမှာနောက်ထပ်အခန်းကဏ္forကနေအနားယူဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်။ အိုမင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်ဟာရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကစားဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ ContactMusic ၏ပြောကြားချက်အရ Hackman က '' ငါ့အသက်အရွယ်မှာသူတို့ဟာငါ့ကိုအဘိုးနဲ့အဖိုးအဖြစ်ကစားခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။
သိပ်ပျော်စရာမဟုတ်ဘူး 'ဘယ်သူမှ Hackman ကိုသေတ္တာထဲထည့်မထားဘူး။ မြင်ကွင်းနောက်ကွယ်မှ Hackman သည်သူ၏ showbiz နှင့်ပျော်ရွင်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာသူသည်အလုပ်နှင့်ပါတ်သက်သောနောက်ကွယ်မှအနတ္တအားလုံးကိုလက်လွတ်မခံခြင်းဖြစ်သည်။
သူက ContactMusic သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ ငါချက်ပြုတ်ဖို့အချိန်လာသောအခါသရုပ်ဆောင်များကိုနှင့်အတူ set ကို၏ဖြစ်စဉ်ကိုလက်လွတ်ပေမယ့်အဲဒီမှာရောက်ဖို့ crapola အများကြီးရှိပါတယ်, အလွန်နာကျင်ပါက '' Hackman ရရှိခဲ့သမျှကိုသင်ရရှိသည့်အခါယူဖို့အကြောင်းပြချက်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး တစ်စုံတစ် ဦး က '' Crapola '' ။ '' သူကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်၊ သူ့ပြhisနာပဲ။ 'အရေးကြီးတဲ့ဇာတ်ကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Hackman ဟာသူရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်လုံးကိုဖန်သားပြင်ပေါ်မှာချေးမထားပေမယ့်အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအသံမထုတ်ရဲဘူး။
WW2 မှ Joe Rosenthal ၏ကျော်ကြားသောရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံတွင်စစ်သားတစ် ဦး ၏မှားယွင်းစွာသတ်မှတ်ခြင်းကိုတနာရီကြာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သောအမည်မသိအလံ Raiserof Iwo Jima ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြောပြရန် Hackman သည်အငြိမ်းစားယူပြီးပြန်လာသည်။ 'ဒီပုံဟာထူးခြားတဲ့အရောအနှောတွေဖုံးကွယ်ထားတယ်။ ' Hackman ကိုယ်တိုင်အသက် ၁၆ နှစ်မှာအထက်တန်းကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ပြီး Marine Corps မှာကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာသူဟာလေးနှစ်ကျော်ကွင်းဆင်းရေဒီယိုအော်ပရေတာအဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့တယ်။ '' သူကအရုပ်ဆိုးတဲ့ကလေးလား၊ 'သူကနောက်တဖန်သရုပ်ဆောင်မလား ကောင်းပြီ၊
Hackman သည်သူ၏ဆုရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုကျေနပ်လောက်အောင်ကျေနပ်အားရပုံရသည်။ အရာ၏စကားပြောခြင်း, သရုပ်ဆောင်ကနေအများကြီးသူ့ကိုယ်သူဝေးကွာသောပုံရသည်။ '' သူ့ဘ ၀ ရဲ့တစိတ်တပိုင်းကတော့သူရဲ့ဆုဟာဘယ်မှာလဲဆိုတာတောင်မှမသိနိုင်ပါဘူး။
သူက GQ ကိုပြောခဲ့တယ်။ “ ငါအိမ်ထဲမှာအမှတ်တရမရှိဘူး။ Dawn Patrouille မှ ErrolFlynn ၏စားပွဲခုံဘေးတွင်အောက်ခြေရှိပိုစတာ မှလွဲ၍ ရုပ်ရှင်ပစ္စည်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစိတ်ကူးယဉ်အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ။ “ Hackman သည်အငြိမ်းစားယူခြင်းမှထုတ်ယူနိုင်သည့်ကဏ္ one တစ်ခုရှိသေးသည်။
သူက“ အက်ဒ်မွန်ကို The Monte Christo မှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ သူသည်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအပြစ်ပေးမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူသည်မှန်ကန်သည်ဟုထင်သောအရာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါဝတ္ထုအဖြစ်ကြိုက်တယ်။ စောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube channel သို့ subscribe လုပ်ရန်သင်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိထားသောအေးမြသောအရာများအားလုံးကိုစစ်ဆေးရန် looper အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ!
Gene Hackman ၂၀၁၉ အသက်ရှင်နေသေးလား။
မင်းသားသေဆုံးသွားတဲ့ကောလာဟလတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက် အကယ်၍ မင်းသည်ခေါင်းစဉ်၏အသက်နှင့်သူအမှန်တကယ်အသက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးလျှင်၊Hackmanသောကြာနေ့ ၈၅ နှစ်ပြည့်သည်။ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၂၀၁၅ ဂ။
Gene Hackman ရဲ့ပိုက်ကွန်ကဘာလဲ။
Gene Hackman Net WorthလစာGene Hackmanအမေရိကန်အငြိမ်းစားသရုပ်ဆောင်နှင့်ဝတ္ထုရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်အသားတင်ရကျိုးနပ်$ 80 သန်း၏။
Gene Hackman ကဘယ်သူလဲ။
Clint Eastwood ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိပါသလဲ
ဘာဖြစ်သလဲClint Eastwood ရဲ့ပိုက်ကွန်တန်ဖိုးရှိ? 2021 ခုနှစ်, ကလင်တန်Eastwood ရဲ့ပိုက်ကွန်တန်ဖိုးရှိခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 375 သန်းခန့်မှန်းထားသည်။2021 မေလ 22,
Clint Eastwood ရဲ့အသားတင်ရကျိုးနပ်မှုကဘာလဲ?
ဘာဖြစ်သလဲClint Eastwood ရဲ့အသားတင်ရကျိုးနပ်? 2021 ခုနှစ်, ကလင်တန်Eastwood ရဲ့အသားတင်ရကျိုးနပ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 375 သန်းခန့်မှန်းထားသည်။2021 မေလ 22,
Leonardo DiCaprio ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲ။
နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်များတွင်သူ၏အခန်းကဏ္iaမှLeonardo Dicaprioဟောလိဝုဒ်မှာသြဇာအရှိဆုံးသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်နှင့်အတူDiCaprioတစ်ခုရှိအသားတင်ရကျိုးနပ်$ 260 သန်း၏။13.05.2021
ဂျက် Nicholson ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိဂျက် Nicholson ရဲ့ပိုက်ကွန်တန်ဖိုးရှိဒေါ်လာ ၄၀၀ မီလျံရှိပြီးသူသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ဇွန် ၁ 2021
အထူးပြု rockhopper ပြန်လည်သုံးသပ်
ချမ်းသာတဲ့ Stallone နဲ့ Schwarzenegger ကဘယ်သူလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တိုင်းတာနိုင်သောမက်ထရစ်တစ်ခုဖြင့်ကြယ်နှစ်လုံး၏ရုပ်ရှင်စုဆောင်းမှုမည်မျှရှိသည်ကိုစတင်ကြပါစို့။ BoxOfficeMojo သည်ဤဆုကို Sylvester သို့ပေးအပ်သည်Stalloneတစ်သက်တာစုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံနှင့်ကျဉ်းမြောင်းစွာရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်Schwarzenegger ရဲ့$ 1.7 ဘီလီယံစုစုပေါင်း။အောက်တိုဘာ ၁၈ ၂၀၁၃
Brad Pitt ကဘာလဲ။
Celebrity အဆိုအရNet Worth,Pittလက်ရှိတန်ဖိုးရှိဒေါ်လာသန်း ၃၀၀25ပြီ ၂၅ 2021
အမေရိကန်သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူနှင့်ပရဟိတအလှူရှင်ဂျော့ကလူနီပိုက်ကွန်ရှိတယ်တန်ဖိုးရှိ2021 ၏အဖြစ်, $ 500 သန်းဒေါ်လာ။ကလူနီ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် AFI တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ကလူနီ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Rande Gerber နှင့် Michael Meldman တို့နှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သော Casamigos Tequilaဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ 2021